Runtastic PRO, yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
Runtastic PRO, yemahara kwenguva shoma
Zvakare, vakomana paRuntastic vanopa iyo PRO vhezheni yeshanduro yavo yemahara uye kwenguva yakati rebei kune avo vashandisi vane tsika yekubuda kumhanya. Mushure meKisimusi, vazhinji, kana vasiri vangangoita vese, vedu vakaita zvisinganzwisisike zvakawandisa pakudya kwemasikati nekudya kwemanheru, uko isu hupfu, nougat uye mamwe maswiti eKisimusi akabatsira zvachose. Kune vese avo vashandisi vanoda kutanga gore idzva vachizadzisa chero huwandu hukuru hwezvivimbiso zvavakaita pakutanga kwegore, Runtastic inotipa iyo PRO application, kuitira kuti pembedzo yekusave nechikumbiro pane iyo iPhone kuti uone macalorie atinopisa, nhambwe yatinofamba kana avhareji kumhanya chipingaidzo chisina musoro.
Mukuwedzera Runtastic inoenderana neApple Watch, kuitira kuti kana isu tiri mumwe wevashandisi vakawana iyo Series 2 modhi inosanganisa GPS, hatifanire kubuda kuti timhanye ne iPhone yedu kuti tikwanise kuziva kana rwendo rwapera, kwatakatamira, daro ratafamba ...
Uye zvakare, nekuda kwekubatanidzwa pamwe neRuntastic online sevhisi, isu tinogona kuwana zvakadzama kuongororwa kwehunhu hwedu kuburikidza newebhusaiti, matsva ekudzidzisa matinogona kushandisa kuvandudza mamiriro edu epanyama, kuwedzera kukurudzira kwedu ... Iri sevhisi Iyo ine pamwedzi mutengo we9,99 euros pamwedzi, asi isu tinogona kutora mukana wekudzikisira kukuru kunopihwa nekunyoreswa kwepagore kwe49,99 euros pagore.
MuApp Store tinogona kuwana yakajairwa yemahara vhezheni, uye iyo PRO vhezheni, zvinova ndizvo zvatiri kutaura nezvazvo. Runtastic PRO ine mutengo wenguva dzose we4,49 euros muApp Store, asi kwenguva yakati rebei tinokwanisa kurodhaunirodha zvachose mahara, kunyorera kuti tikwanise kudzoka kuhukuru hwakaenzana hwechiuno hwataive nahwo pasati pazororo reKisimusi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Runtastic PRO, yemahara kwenguva shoma
Uye ndeupi musiyano uripo pakati pemahara nepro pro kana ivo vachiitawo kuti ubhadhare kunyoreswa kwegore?
Mhoroi, Emy. Ini ndinokupindura nekuti ndanga ndichiishandisa kwenguva yakareba uye shamwari dzangu dzakagutsikana neyakajairika. Iyo yakajairwa, kutanga nayo, ine kushambadzira. Ipapo, iyo pro inopa zvinhu izvo zvakajairwa zvikasapa, sekunge kuti iwe unogona kuona iyo nzira yawakaita neakasimba mavara. Iyo pro inokupa iwe rumwe ruzivo pasina miganho.
Izvo iwe zvaunofanirwa kubhadhara pasi pekunyoreswa inyaya ye, semuenzaniso, iwo ekudzidzisa marongero. Kana iwe uri wepamberi, ivo vanokuita iwe ekudzidzisa marongero akadai, semuenzaniso, imwe yaunotenderera uchikwenenzvera pazasi peiyo lactate chikumbaridzo chemaminitsi mana, 4 pamusoro pechikumbaridzo, 1 pazasi, imwe pamusoro uye 4m ye «zororo». Irori rinenge riri zuva rekudzidziswa kwemwedzi mumwe chete izvo zvinobva zvave kuwana premium.
Mukupfupisa uye kudzokera kuapp, iyo Pro inokosheswa nekuti iko kunyorera pachako hakuna miganho.
Mhoroi, yakatariswa neni nhasi, neiyo yakatarisa 2 Runtastic inokukumbira kuti iyo iPhone ibude kumhanya. Zvinonyadzisa
Isu tinoongorora iyo iVAPO dock yeApple Watch uye iPhone